Abavelisi kunye nabaXhobisi beNja iiKhola zeKhola I-China Inja yeCollars yokubopha i-Leashes Factory
Ikhola yenja yelaphu ebonakalayo iyilelwe nge-nylon webbing kwaye ithambile, iphefumla imesh. Le khola ye-premium ayisindi kwaye inceda ukunciphisa ukucaphuka kunye nokuhlikihla.
Ikhola yenja ebonakalayo yelaphu ikwayilelwe ngezinto ezibonakalayo ezibonakalayo inceda ukugcina umntwana wakho ekhuselekile ngokwandisa ukubonakala kwakhe ngexesha lokuhamba ebusuku.
Le khola yenja yelaphu ebonakalayo ineeringi ezikumgangatho ophezulu ze-D. Xa uphuma kunye nomntwana wakho, vele uncamathisele i-leash kwindandatho yentsimbi eyomeleleyo kwaye uthathe uhambo ngokuthuthuzela nangokulula.
Indawo yokubopha inja kunye nebhanti yesitulo inendawo egcwele ivesti egcina umhlobo wakho onoboya ekhululekile ngexesha lokuhamba.
Ukhuseleko lweenja kunye nebhanti yesihlalo kunciphise ukuphazamiseka komqhubi. Ukhuseleko lweenja zigcina izinja zakho zikhuselekile kwisitulo sazo ukuze ukwazi ukugxila endleleni ngelixa uhamba.
Le ntambo yokubopha ukhuseleko nebhanti yesihlalo kulula ukuyibeka kwaye uyikhuphe. Yibeke phezu kwentloko yenja, emva koko uyiqhoboshe, kwaye uhlengahlengise imitya njengoko ufuna, uncamathisele ibhanti lokhuseleko kwi-Dingi kwaye ubophe ibhanti yesihlalo.